Semalt Expert - Nzira Yokuzvidzivirira Sei kuMac Malware?
Kutanga, kudzivirira pachako kunoramba kuri chinhu chinokosha zvikuru kana zvasvika pakudzivirira malware. Chinonyanya kukosha, kuchengeta system yako uye software yako yose kusvikira zvino. Makambani eSofisi anowanzowana uye kugadzirisa zvinetso zvekuchengetedzwa. Zvinotyisa izvi zvinowanzopa nzira dzevaseki kuti vaone nzvimbo dzisina simba uye kuisa software yakaipa pamushini wako. Pane dzimwe nguva, vanhu vanofunga kuti pakusunungurwa kwechirongwa chekuvhara chisungo chekuchengeteka, vatengesi vaizorega - is semi dedicado e vps. Zvisinei, zvinyorwa zvadaro zvinopa vatengesi nenzira yakakodzera yekurwisa makombiyuta asina kuongororwa.
Somuenzaniso, malware (Sabpab) yakave yakabuda muna 2012 yakashandisa kushungurudzwa kweMicrosoft Office iyo yakanga yabviswa nekuvandudzwa kwakaitika muna 2009. Saizvozvowo, trojan yeBlackback yakashandisa zvishoma nezvishoma zvakashata zvainge zvakagadzirirwa. Saka, zvakakosha kuisa zvinyorwa.
Andrew Dyhan, Mutengi Wekugutsikana Kwevatereji Semalt , anoziva nzira yekuzvidzivirira kubva kune mac malware.
Adware inokurumidza kupararira kune Mac OS. Adware zvine chokuita nemapurogiramu anoramba achiwedzera mazuva ose. Zvinonzwisisika, anti-virusi software yakafanana neApple's anti-malware kudzivirira haigoni kuona aya Adware. Zvakaipisisa, kunyange kana zvikaonekwa, mapurogiramu e-anti-virus haazobvisa zvachose utachiona. Zvisinei, adware inogona kudzivirirwa nyore nyore nekutendwa kwekutendeseka. Iva nechokwadi chokuti iwe unonyatsocherechedza chibvumirano cheproofesi yelayisensi inoratidzwa ne installers. Kana iwe uchikumbira kuti uise chimwe chinhu chakasiyana kubva pane software yawakaronga kuitora, siya pane installer.
Kare, Java yave ichizivikanwa kuva iyo inogona kuitika. Nenzira yakanaka, dzimwe shanduro dzakagadziriswa kuita Java yakachengeteka zvikuru mumavhura. Nokudaro, hapana matambudziko matsva eJava akacherechedza. Zvisinei, zvitsva zvitsva zvinogona kuoneka nokukurumidza. Saka, shandisa Safari 6.1 kana kuti zvinyorwa zvekare uye uzvibvumira kuti zvivimbise Java kune mamwe mawebhusayithi anofanira kushandisa Java.
Mamwe maInternet-based technologies
Chokutanga pane zvose, Flash-based exploit iko imwe dambudziko. Nyaya dzakadaro dzakashandiswa munguva yakapfuura kuti dzisavirire Mac. Nenzira yakanaka, HTML5 yehuwandu yakatsiva Flash content mumamiriro ezvinhu epanguva ino. Zvisinei, kana kudzivisa Flash hakusi kusarudza saka isa ClickToFlash kuwedzera mune Safari browser iyo inodzivisa Flash isina kudiwa. Zvimwe, Chrome browser yakachengetedzeka zvakanyanya sezvo i "choda kutamba".
Kudzivisa maTrojans nezvimwe nyaya dzekuchengeteka
Kupfuura zvinhu zvinokurukurwa pamusoro apa, unofanira kunge wakangwarira zvakakwana kuti uzvidzivirire kubva kune dzimwe trojans. Chinonyanya kukosha, usasvinudza shanduro kana software kubva kune imwe nzvimbo isingazivikanwi. Uyezve, chengetedza mafiribhu asina kuvharika. Munhu ane mafungiro asina kunaka angakutumira iwe faira yakaipa kuburikidza nemutambo.
Pakupedzisira, ramba uchigara uchidzokorora zvakare. Zvinonzwisisika, imwe yakasiyana yekunze drive. Nenzira iyo, kana kombiyuta yako ikatapukirwa, iwe uchava nemhando dzakasiyana siyana dzekugadzirisa nyaya yacho.